Caafimaadka Dhirta Khudarada Ah – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Caafimaadka Dhirta Khudarada Ah
Caafimaadka Dhirta Khudarada Ah
Geedka dabacasaha ayaa noqday hab cusub oo lagula dagalamo kansarka ku dhaca qanjidhka kaadi mareenka. Cilmi baadhayal ka tirsan jaamacada Yole ee dalka maraykanka ayaa ogaday in dabacasuhu yahay daawo si awooda badan oo lagula dagaalami karo kansarka ku dhaca qanjidhka xiniiyaha ee “prostrate” .
Wargaysa Daily Mail ee ka soo baxa dalka ingiriiska oo natiijda cilmi baadhista caafimaad baahiyay ayaa sheegay in baadhitaano xeeldheer ka dib ay cilmi baadhayaashani ogaadeen in qofka si joogto u isticmaala cuntooyinka qaniga ku ah vitamin A ay hoos u dhigi karaan khatarta kansarku ku yeelan karo inuu dhax galo qanjidhka prostrateka xiniiyaha. Cilmi baadhistan ayaa aad dad badani ugu farxeen.
Bukaan Ingiriiska Lagu Dabiibayo oo Noqday Qofkii Labaad ee Si Buuxda...